Tsy tokony hahatsiaro tena ho voafandrika izy
Halan'ny lehilahy ny mahatsiaro manao zavatra an-tery. Tsy tiany koa ny gejaina sy fehezina be. Tsy mikasikasika be azy : Raha mbola tsy tena fantatrao tsara izy dia fero ny fifampikasohana ara-batana. Aleo hiainga avy any aminy izany.
Tsy mamboraka fitia mialoha
Raha ny tokony ho izy dia izy no tokony hiteny aminao voalohany fa "tia". Fadio ny miteny hoe "tiako ianao" azy raha mbola tsy nanao izany taminao izy.
Aza maika manome anaram- bositra azy
Mahafinaritra antsika vehivavy tokoa ny manome solon'anarana mahafatifaty ny olon-tiana toy ny hoe "piso" na "malalako" sy ny sisa. Aza manao izany anefa raha tsy efa mba nanome solon'anarana anao izy aloha. Fantaro koa ny solon'anarana tiany satria misy lehilahy mihevitra azy ireny ho tsy mifanaraka amin'ny toetra maha lehilahy azy.
Aza maika hitondra azy amin'ny namana sy fianakaviana
Raha mbola tsy nangataka hihaona amin'ireo ray aman-dreninao sy namanao izy dia aza maimaika mihitsy hitondra azy any aminao. Mifankafantara tsara aloha. Aza avy hatrany dia manao tetikasa be ho amin'ny ho avinareo : Satria mbola tsy tena mifankafantatra ianareo dia mbola tsy azo antoka ny ho avy. Ny anio aloha hankafizina tsara.
Tsy mbola fantatrao tsara izy ka noho izany tsy hainao ny zavatra zakany na tsia. Fadio ny manao fanakianana na inona na inona anton-dresaka mba tsy ho diso paika. Tsy tsara koa ny ahitany anao ho toy ny olona mihevi-tena ho tonga lafatra.
Tsy azo atao mihitsy ny mitratrevatreva ao anatin'ny fiarahana. Ilaina koa ny manisy mistery ny momba anao mba ahatonga azy ho liana sy maniry hambabo anao hatrany.